News - Polycrystalline diamond kọmpụta (PDC) egbutusị
Polycrystalline diamond kọmpụta (PDC) na-egbutusị
Daimọn bụ ihe kacha sie ike mara. Isi ike a na-enye ya ihe ndị kachasị elu maka ịkpụ ihe ọ bụla ọzọ. PDC dị ezigbo mkpa maka ịkụ ala, n'ihi na ọ na-achịkọta obere, ọnụ, diamonds emebere ka ọ baa ụba buru ibu, ndị toro eto na kristal na-enweghị usoro nke nwere ike ịmepụta n'ụdị bara uru a na-akpọ tebụl diamond. Tebụl Diamond bụ akụkụ nke onye cutter na kpọtụrụ usoro. E wezụga ha ekweghị ekwe, PDC diamond table nwere ihe dị oké mkpa e ji mara maka malite ịgba-bit egbutusị: Ha rụọ ọrụ nke ọma bonding na tungsten carbide ihe nwere ike brazed (mmasị) ka bit ozu. Diamonds, n'onwe ha, agaghị ejikọta ọnụ, ha enweghịkwa ike ijikọ site na brazing.
A na-ejikarị grit diamond kọwaa obere mkpụrụ (-0.00004 na.) Nke sịntetik sịntetik ejiri mee ihe dị ka isi ihe maka ndị na-egbu PDC. Banyere kemịkal na akụrụngwa, manmade diamond yiri nke eke diamond. Diamondmepụta grit diamond gụnyere usoro dị mfe kemịkalụ: ikuku carbon nkịtị na-ekpo ọkụ n'okpuru oke nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ. Na omume, Otú ọ dị, ịmebe diamond dị mfe.
A na-atụgharị kristal diamond ọ bụla dị na grit diamond. Nke a na-eme ka ihe ahụ sie ike, dị nkọ, na, n'ihi ike nke diamond ahụ dị, na-eyi akwa na-eguzogide ọgwụ. N'ezie, usoro a na-ahụ anya nke achọtara na diamond nwere ihe ejikọtara ọnụ na-arụ ọrụ nke ọma na shear karịa diamonds dị egwu, n'ihi na okike diamond bụ kristal cubic nke na-agbaji n'ụzọ dị mfe n'akụkụ oke ha.
Diamond grit adịghị agbanwe agbanwe na oke okpomọkụ karịa diamond okike, agbanyeghị. Ebe ọ bụ na ihe na-akpata ọla edo nke tọrọ atọ na ngwangwa ahụ nwere ọnụọgụ nke mmụba nke okpomọkụ karịa diamond, mmụba dị iche na-etinye njikọta diamond-na-diamond n'okpuru ịkwa osisi na, ọ bụrụ na ibu dị elu, na-akpata ọdịda. Ọ bụrụ na agbụ anaghị ada, diamonds na-efu ngwa ngwa, yabụ PDC tufuru ike ya na nkọ ya wee bụrụ nke na-adịghị arụ ọrụ. Iji gbochie ọdịda dị otú ahụ, ndị na-egbutu PDC ga-abụrịrị nke ọma mgbe ha na-egwu ala.
Iji rụpụta okpokoro diamond, a na-eji okwute tungsten carbide na ọla edo mee ka etinyere ọla kọpa iji mepụta akwa oyi akwa bara ụba. Ha dị ka ọdịdị wafer, ma a ga-eme ha ka ha sie ike dịka enwere ike ịhazi, n'ihi na olu diamond na-abawanye ndụ. Kasị elu-mma diamond table bụ are2 ka 4 mm, na technology ọganihu ga-amụba diamond table ọkpụrụkpụ. Tungsten carbide substrates na-ejikarị ≈0.5 na. Elu ma nwee otu akụkụ obe na akụkụ dị ka tebụl diamond. Akụkụ abụọ, okpokoro diamond na mkpụrụ, mejupụtara onye na-egbutu ihe (Fig 4).
Me PDC n'ime ụdị dị mma maka ndị na-egbu ihe na-agụnye ịtụkwasị diamond, yana mkpụrụ ya, na arịa nrụgide wee na-emegharị na nnukwu okpomọkụ na nrụgide.
A gaghị ekwe ka ndị na-egbutu PDC gafee okpomọkụ nke 1,382 Celsius Celsius. Oké okpomọkụ na-arụpụta ngwa ngwa ngwa ngwa, n'ihi na mmụba dị iche iche dị n'etiti ihe nraranye na diamond na-agbaji kristal mebiri emebi na tebụl diamond. A na-etinye ikike dị n'etiti okpokoro diamond na tungsten carbide mkpụrụ site na mgbasawanye dị iche iche.